Puntland iyo Somaliland oo mamnuucay isku soo baxa & ku dukashada salaada masaajida - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Puntland iyo Somaliland oo mamnuucay isku soo baxa & ku dukashada salaada...
Puntland iyo Somaliland oo mamnuucay isku soo baxa & ku dukashada salaada masaajida
Dowaladaha Puntland iyo Somaliland oo mamnuucay isku soo baxa iyo ku dukashda salaada ciida ee masaajidada. Cawil Sheekh Xaamud, Wasiirka cadaaladda ee maamulka Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa waxaa uu sheegay in maamulka Puntland uu mamnuucay in saalada ciida lagu tukado masaajida ku yaala deegaanada Maamulkaasi, sababta la xiriira cudurka covid 19.
Wasiirka cadaalada ayaa waxaa uu sheegay in go’aan ay ugu goleeyihiin sidii uusan u faafi laheyn cudurka corona virus oo dhibaato badan ku haya shacabka ku nool deegaanada maamulka Puntland Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in ciidka kadib dib loo furi doono dugsiyada Qur’aanka, islamarkaana in dugsiyada Qur’aanka looga baahan yahay in shuruudo dhawr ah, si looga hortago faafitaanka COVID19.
Dhanka kale Guddida heer qaran Covid19 ee Somaliland ka dib markii ay wada tashi la yeesheen Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka iyo Dhakhaatiir Khibrad durugsan u leh sida laysugu gudbiyo Xanuunka Covid19, waxa ay soo saareen Go’aamo.
Go’aamadan ay guddidu soo saartay waxaa lagu joojiyey Gabi ahaanba Isu soo bixii maalmaha Ciidda iyo Tukada Salaadda Ciidul-fidriga ee Masaajidada iyo Garoomada. Sidoo Kale Waxaa lagu joojiyey Guud ahaanba Isu-socodka Gaadiiidka Dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay Ee Gobolada iyo Degmooyinka Dalka.
Waxaa la faray Mulkiilayaasha Garoomada iyo Goobaha Caruurtu Ku Ciyaarto inaan la furi karin si looga bad baado Xanuunka Covid19. Waxaana la faray Dhammaan laamaha Ammaanka ee Dalka inay ku hawl galaan Ammaradan Guddida heer Qaran ee Covid19 JSL. Go’aamada ka soo Baxay Guddida heerka qaran ee Covid19 ayaa u dhignaa sidan:
Previous articleWadatashiga Beesha Caalamka oo la soo afjaray, & go’aano culus oo dhawaan laga qaadan doono DFS
Next articleHolidaying in lands that don’t exist: Somaliland